အိုင်ရင်းဂျီ | | လက်မှုပညာနှင့်ပစ္စည်းများ
ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာငါထံအပ်နှံပို့စ်များကိုတင် ပိုလီမာရွှံ့စေး, ပုံသွင်းသည်နှင့်မရေမတွက်နိုင်သောအဘို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည် လက်မှုပညာများ။ နှစ် ဦး စလုံး figurines စေရန်, သော့ချက်ကြိုးသို့မဟုတ်လက်ဝတ်ရတနာစေရန်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၎င်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရခြင်းသည်အလွန်ပျော်စရာဖြစ်သည်။
တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာစျေးနှုန်းအလွန်မြင့်မားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းသည်အလွန်မြင့်မားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသေချာလျှင်၎င်းကိုမည်သို့ဝယ်ယူရမည်ကိုမသေချာလျှင်၎င်းသည်မ ၀ ယ်ရန်လုံလောက်သည်။ ကောင်းတဲ့အသုံးပြုမှု။ ထိုအကြောင်းကြောင့်, ငါသည်ယနေ့ post ကိုငါအောင်စာရွက် upload အိမ်လုပ်ပေါ်လီမာရွှံ့စေး ဒါကြောင့်သင်ဟာဒီထက်ပိုပြီးစီးပွားရေးအရစမ်းသပ်ပြီးကစားနိုင်ပါတယ်
La ထို့အပြင် Fimo အဖြစ်လူသိများပေါ်လီမာရွှံ့, တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်း၏ဤကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးအပါဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲပေါ်လာသောပုံစံများနှင့်မယုံနိုင်လောက်သောရလဒ်များထက်ပိုမိုသောအရာများကိုဖန်တီးနိုင်သည် သူမနှင့် ပတ်သက်၍ သင်လိုအပ်တာအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုကြယ်ပွင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြင့်တင်ပြပြီးကတည်းကယခုကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည့်အရာကိုကောင်းစွာသိရန်လိုအပ်သည်။ ပိုလီမာရွှံ့သည်ပုံသွင်းနိုင်သောငါးပိဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါတို့ငယ်သောအရွယ်ကဲ့ သို့ဖြစ်၍၊ ကောင်းပြီ၊ ဒါကဒီနဲ့ဆင်တူတယ်။ ၎င်းကိုလူငယ်များနှင့်ငယ်ရွယ်သူများကအသုံးပြုနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးမည်သည့်ပြtypeနာမျှမလိုအပ်ပါ။
ပလပ်စတစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာဤရွှံ့သည်အရောင်များကိုပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အရောင်နှစ်မျိုးကိုရောစပ်လိုက်လျှင်မူရင်းစကျင်ကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်။ သင်ရောနှောချိန်ကိုပိုရှည်စေမည်ဆိုလျှင်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းပေါင်းစပ်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်။
CLAY PENDANTS ကိုဖန်တီးရန်စိတ်ကူး
1 teflon အိုး.
1 ခွက် အဖြူကျောင်းကကော် (ဒီမှာဝယ်ပါ).
1 ခွက် ပြောင်းဖူး.
2 ဇွန်း ဓာတ်သတ္တုရေနံ.
1 ဇွန်း ရှောကျသီး.
အမှုန့်အပူချိန် ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကို။ (ဒီမှာဝယ်ပါ)
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို Teflon အိုး၌ရောစပ်မည် နိမ့်ကျအပူကျော်အပူထား၏။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မုန့်စိမ်းကိုအရောင်ရင့်စေလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပါဝင်ပစ္စည်းများတွင်အလိုရှိသောအရောင်အမှုန့်ကိုထည့်သွင်းပေးပါလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပါကမုန့်စိမ်းသည်အဖြူရောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ Teflon အိုးထဲတွင်ပါဝင်သည့်အရာများပြီးတာနဲ့ ကျနော်တို့နိမ့်ကျအပူကျော်ဆယ်မိနစ်အဘို့အရောနှောပါလိမ့်မယ် မုန့်စိမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အပူမှအပူကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအအေးခံပါ။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်ပြီးစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည့်တိုင်အောင်၎င်းကိုတူးပါ။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်၎င်းကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်၎င်းကိုလုံလုံခြုံခြုံသိမ်းထားသည့်အိုးထဲတွင်သိမ်းထားရန်လိုအပ်သည်။
အပေါ်ကပုံမှာလုပ်ထားတဲ့အပိုင်းတွေကိုတွေ့နိုင်တယ် ပိုလီမာရွှံ့စေး မင်းလုပ်နိုင်တာက
ယခု၎င်းသည်ပုံသွင်းနိုင်သောငါးပိတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိလာပြီဖြစ်သောကြောင့်၎င်းရွှံ့စေးကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်သို့မဟုတ်မည်သို့ကုသသည်ကိုဖော်ပြသည့်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ရမည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့အဲဒါကိုပုံဖော်ရမယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားလိမ့်မယ် မင်းလက်နဲ့ပုံသွင်းလိမ့်မယ်။ ၎င်းအပူရှိန်ကြောင့်ရွှံ့စေးကိုကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးလွယ်ကူလိမ့်မည်။ သငျသညျကိန်းဂဏန်းဖန်တီးပြီးတာနဲ့သင်ကမီးဖိုထဲကယူရှိသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒါကိုသာမန်မီးဖိုထဲမှာမိနစ်အနည်းငယ်ထားခဲ့မယ်။ ရွှံ့စေးပုံးတစ်လုံးစီတွင်၎င်းတို့သည်သင်စွန့်ခွာရမည့်အချိန်ကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။ သို့သော်ယေဘူယျအားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၅ မိနစ်ခန့်သာရှိသည်။ ၎င်းကိုမီးဖိုထဲမှကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ထုတ်သောအခါ၊ ၎င်းကိုအအေးခံ။ ဤအရပ်မှသင်လုပ်ထားသောပုံကိုသင်ဖြတ်ထုတ်နိုင်သည်။ ရိုးရှင်းပါတယ်!
ကျွန်ုပ်တို့သွားသင့်သည့်နေရာများ ပေါ်လီမာရွှံ့များကိုဝယ်နိုင်ပါ, စာရေးကိရိယာစတိုးဆိုင်များနှင့်ယာဉ်စတိုးဆိုင်များဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းကိုလူသိများသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သော်လည်းဤနေရာအားလုံးတွင်တစ်ခုမျှမရှိနိုင်ဟုပြောရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်အမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်။ စာမျက်နှာအတော်များများလည်းသင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်လက်မှုပညာများလည်းရှိသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များများစားစားမရှိသောသူများအတွက်သာသင်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုလိုအပ်သည်ထက်ပိုမလိုချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အစမှာငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီပစ္စည်းကို Fimo လို့လည်းခေါ်တယ်။ Fimo သည်ရွှံ့စေးတံဆိပ်၏တံဆိပ်ဖြစ်ပြီးယေဘုယျအမည်မဟုတ်ကြောင်းသတိရသင့်သည်။ ကောင်းပြီ, ဒီအခြေစိုက်စခန်းကနေစပြီး၊ ဒီနာမည်အောက်မှာစပိန်နိုင်ငံမှာရွှံ့တွေတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ သင်၌မျိုးကွဲနှစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
Fimo ဂန္ထဝင်။ ပုံသွင်းရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲသော်လည်းကြာရှည်ခံသည်။
Fimo ဆော့အခုအသုံးပြုဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးတော့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အတွက်အလွယ်တကူကျိုးပဲ့နိုင်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်လည်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုတွေ့လိမ့်မည် Sculpey နှင့် Kato။ ဒါကြောင့်သူတို့နှင့်သင်အလုပ်လုပ်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိတော့ပါ။
လူအများစုကဒါကိုစဉ်းစားကြသည် ပိုလီမာရွှံ့စေး သငျသညျကိန်းဂဏန်းများသာလုပ်နိုင်သည်, သင်ကအများဆုံးရှာတွေ့သည်ဖြစ်သော်လည်းဤရွှံ့စေးအမျိုးအစားသည်ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသည်။
သင်ကိန်းဂဏန်းများကိုလုပ်လိုပြီးစတင်နေပြီဆိုလျှင်သင်စတင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည် လွယ်ကူသောအရုပ် နှင့်အသေးစိတ်အနည်းငယ်နှင့်အတူ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်ပုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကိုပုံသွင်းရန်သင်ကြားပေးသည့်ဓာတ်ပုံတွင်“ တစ်ဆင့်ချင်း” သင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
များသောအားဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသောကိန်းဂဏန်းများသည်ရိုးရှင်းပြီးအလွန်ဖက်ရှင်ကျသည်။ ၎င်းတို့သည် kawaii စတိုင်အစားအစာများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခဲတံတစ်ခုသို့မဟုတ်ဘောပင်တစ်ချောင်းအတွက်နားကပ်များ၊ လည်ဆွဲများ၊ အလှဆင်များအဖြစ်ထည့်သွင်းခြင်း၊ သော့ချိတ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းတွင်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
လည်း ပန်းပွင့်နှင့်အပင်များကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည်အလှဆင်ရန်။ ရလဒ်ကအရမ်းကောင်းတယ်။ သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောချောချောမွေ့မွေ့ကိုဖန်တီးရန်ဖြတ်စက်များနှင့်ကိရိယာများဖြင့်သင့်ကိုကူညီပါ။ အသေးစိတ်တစ်ခုမှာသင်က pastry cutters တွေကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
ငါဖော်ပြပြီးသကဲ့သို့, သင်သာကိန်းဂဏန်းများလုပ်ဖို့မလိုပါ လှေအလှဆင်s ဟာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပဲ။ သင့်တွင်နေ့စဉ်သုံးသောဖန်ခွက်အိုးများကိုအလှဆင်ရန်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်သင့်အားလှုံ့ဆော်ပေးမည့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများစွာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည် polymeric baking ရွှံ့ကိုသုံးပါကအပိုင်းအစတစ်ခုလုံးကိုမီးဖို၌ထည့်ရန်မလွယ်ပါ။ သတိထားပါ၊ ပလတ်စတစ်ဘူးများကိုမသုံးပါနှင့်။ ဤကိစ္စတွင်သင်၏အလုပ်သည်အလွန်ဆိုးရွားသွားလိမ့်မည်။
ဤအရာများအပြင် ထပ်မံ၍ လူသိများသောပိုလီမာရွှံ့စေးကမ္ဘာပေါ်တွင်“ millefiori” သို့မဟုတ်စပိန်“ ပန်းထောင်ပေါင်းများစွာ” တွင်လူသိများသောအလှဆင်နည်းစနစ်တစ်ခုရှိသည်။ ပါဝင်သည် ပိုလီမာရွှံ့စေးအပိုင်းအစများအတူတကွပေါင်းစပ်ခြင်း ၎င်းသည်အချပ်များအဖြစ်ဖြတ်ပြီးသင်ဖန်တီးထားသောပုံကိုစိတ္တဇဖြစ်စေ၊ အစအ ဦး ၌ပန်းများကိုတီထွင်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပြီးသင်ယခုအရာအားလုံးကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာနှင့်ပစ္စည်းများ » အိမ်လုပ်ပေါ်လီမာရွှံ့လုပ်နည်း
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါးကောင်း၊ မျှဝေပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ပိုလီမာရွှံ့စေးကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းကိုသင်မသိခဲ့ပါ၊ ယခု၎င်းကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ အမှုန့်အပူချိန်ဆိုတာဘာလဲ။ ငါမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်ပြီးသင့်ကိုမှန်ကန်စွာနားလည်မှုရှိမရှိ၊ သင် tempera ဟုပြောသောအခါသင်ကအမှုန့်ဆေးသုတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်၊ ၎င်းသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်မည်သို့မည်ပုံဖြစ်မည်ကိုမသေချာပါ။
၁။ အမှုန့်အပူချိန်ကဘာလဲ။ အဲဒါ anilines ဖြစ်နိုင်မလား ငါကြွေတဲ့ကြွေထည်အတွက်သုံးတယ်၊ အဲဒါဟာတူညီတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပဲ
Bianca scheiber ဟုသူကပြောသည်
ဒီပိုလီမာရွှံ့စေးဆိုတာမပြောပါနဲ့၊ သင်ဟာအိမ်လုပ်ငါးပိ၊ အအေးခွက်၊ ပြင်သစ်ကြွေထည်လုပ်ခြင်း၊ လူတွေကိုအမှားမကျမိအောင်လုပ်ပါ
Bianca Scheiber အားစာပြန်ပါ
ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းပို့စ်ကိုပြင်ပေးပါ၊ ဒီဟာကရွှံ့စေးရွှံ့စေးမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကအိမ်လုပ်ကြွေထည်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ပိုလီမာရွှံ့စေးများသည်ရှုပ်ထွေးသောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များလိုအပ်သည်။ ၎င်း၏အမည်အရ၎င်းသည်ပိုလီမာသို့မဟုတ် PVC ပလပ်စတစ်ဖြစ်သည်။ လူတွေကိုရှုပ်ထွေးမသွားစေနဲ့။ ငါကပိုလီမာရွှံ့ပုံစံလုပ်တဲ့သူပါ၊ ဒါကငါလုပ်တဲ့အလုပ်ကလွဲလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။
Polymeric သည် PVC ကိုအခြေခံထားသောငါးပိဖြစ်ပြီးဗီနိုင်းကလိုရိုက်၏မော်လီကျူးများစွာ (monomers) များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောပလပ်စတစ်ပေါ်လီမာဖြစ်သည်။ ဗီနိုင်းကလိုရိုက် polymerization လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်အမင်းအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပြီးစက်ရုံများတွင် hermetically တံဆိပ်ခတ်ထားသောဓာတ်ပေါင်းဖိုများတွင်ပြုလုပ်သည်။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း ,, ဤလက်မှုပညာအမျိုးအစားများအတွက်မီးဖိုမဖြစ်မနေဖြစ်သနည်း
ငါကဒီပေါ်လီမာရွှံ့မဟုတ်, အိမ်လုပ်အအေးကြွေဖြစ်ပါတယ်သဘောတူသည်။ မီးဖို၌မည်မျှပင်ခက်ခဲသည်ဖြစ်စေခြောက်သွေ့စေပါ။ အပိုင်းအစကိုရေတွင်ထည့်သွင်းပါကပိုလီမာရွှံ့စေးနှင့်မဖြစ်နိူင်ပါ။ ပြwithoutနာမရှိဘဲရေထဲ၌ရှိနေနိုင်သည့်အတွက် PVC အရာဝတ္ထု
Bellanira Melendez ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုခြင်းကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးရှင်းလင်းသွားစေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တိုင်းပြည်တွင်ဤထုတ်ကုန်မရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ပနားမားတွင်နေထိုင်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အမှန်မှာ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုရောင်းချသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အအေးကြွေထည်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဆောင်းပါးသည်အလွန်ကောင်းပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် PVA ပါသောပိုလီမာရွှံ့စေးကိုလေလွင့်နေသောပေါ်လီမာရွှံ့များဖြစ်သော polyvinyl alchohol နှင့်လွဲချော်ပါသည်။ ကိုရီးယားရွှံ့စေးများသည်၎င်းတို့သည်အရည်အသွေးကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ မင်းရဲ့ပို့စ်ကိုငါသေသေချာချာဖတ်တယ်၊ အဲဒါကဘယ်အရာကိုဖုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြခဲ့ဘူး။ အာဂျင်တီးနားမှကျေးဇူးတင်စကား
စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှနွေ ဦး ပေါက်မှတ်စုတစ်ခုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကို DIY ပြုလုပ်ပါ။